MUUQAAL: Jubbaland oo ka Hadashay Maxakamadda Lasoo taagay Wasiirkii Amniga iyo Xadhigiisa Muqdisho | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Jubbaland oo ka Hadashay Maxakamadda Lasoo taagay Wasiirkii Amniga iyo Xadhigiisa Muqdisho
Oct 9, 2019 - 10 Aragtiyood
Kismaayo ( Kalshaale ) Magaalada Muqdisho waxaa dhowaan Maxkamad lagu soo taagay Wasiirkii Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo masuul kale oo lagu hayso Dambiyo ay gaysteen.
Madaxwayne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid aadan oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay ka xunyihiin Xadhiga iyo Maxkamadda lasoo taagay Xubnahaasi.
“Hadii sharciga lagu dhaqmi waayo, waxaynu ku noqonayaa dagaaladii sokeeye iyo in la waayo Qaranimadii, Xukuumadudu waxay inkiraysaa Sharciga, Wasiir Halgaamaa ah in dawladiisii ay xidho waa nasiib darro , Cidii wax tabanaysa waxa Xaq u leeyihiin inay ka Dacweeyaan maxkamadaha Jubbaland.“ Ayuu yidhi Sayid Aadan.
Wuxuuna isagoo hadalkiisa wata sheegay inay Cawaaqi Xumo ka dhalantoodo Xadhiga Masuuliyiintaasi.
Dhinaca kale wuxuu ka hadlay Xaflada Caleemo saarka Madaxwaynaha maamulka Jubbaland, Axmed Madoobe oo dhowr jeer dib u dhacday, Wuxuuna xusay in marka Martida lagu casuumay ay yimaadaan ay Qabsoomi doonto.
Beesha marexan we degta gedo ama jubaland waa kafeejignaadaan ilkayarta galgaduud ama maqane hirab waayo noman dileysan galgaduud weyso baneeyeen hadana gedo ayey raban iney siiyaan kuwa ibixiyey magaca beenta ah ee walaala galgaduud
Sadexda ninba waa ilkayar farmajo maxidho miyaa caadheer walee absame lagabaqey
Maxkamadaan bugta ah, waxay dambi ka gashay Somalinimadii, ragga dalkaan maanta madaxda ka ah oo xildhibaano ah iyo Cumar Filish xamar dadkuu ku xasuuqay caroortii xukuma..
Meeye kii Iidoor, Dhaweyne oo Galkacyo berkedaha sun ugu shubay shacabka, Cali Mahdi, Muuse Suudi, Qaybdiid, Indhocadde…ma tirin karo.
Ninkaaan wax kale laguma haysto..waa adoo Mareexan ah: maxaa Modoobe u dabo socotaa.
Laakiin dhibka ugu weyn, waa in Somalia kala go’ayso.
Dee Madaweyne in Xamar lagu xayiro gaartay maxaa xiga…..?
meeshiiba eybaa degtay iska xiran macal maamul gobol oo shaqo u yimid.
kalsooni darada nimankaan bilaabeen in dalka ku kala jareen yaa ila arka?
Waa dad in Somali isku imaan mushaar ku qaata.
dee yaa Xamar idin kugu imaan..nobody.
Eeyo N&N…waa hubaa in ayaga wadan qorshahaa .
Dee yaa Xamar idinkugu imaan, fucking hostage takers.👎
Daanyeer miyaa tahay?
war ninkaan maxaad maamul cagdheer dowlad madax u yihiin u taageertay lagu haystaa..”.
Caawa haddii war crimal laga hadlo ma ninkaan ayaa maskadaada kusoo dhici lahaa?
Ninkaan Farmaajo u xiran yahay, runtii wuuna ceeboobay.
Ninkaan daanyeerka ah difaaci maayo ee dabiile qaran ama war crimal ayaa la kufsaday….
Ayaga waa laga yaabaamin rag Qaybdiid, Muuse Suudi, Cali Mahdi, Indhacade, Morgan iyo groups kale ku cabsiinayeen.
Laakiin this is rediculous in ninkaan loo xiray war criminal. Dambiile dagaal, where’s the real price?
Damliilahii ugu weynaa dowladooda ku jiraan..
Yaab….walle in taageerayn kuwaan, sanadka u haray ayaaba igu dheer.
Waleee dawladnimo ayaa soo uraysa.
Hadaad aragto waxbaa la xidhay,waxbaa la qabtay waa sunaha lagu garto dawladnimada.
Waxay raban meeshii layska biqlaynjiray kk
Wax waliba wakhti ayay leeyihiin.Nin dambe oo dad Somaliyeed iska layaa oo xornimo ugu noolaada aduunka ma dhicidoonto.
Wxii hore u soo biqleeyay waa nasiibkooda.
Nabad iyo nolol waa loo kordhinayaa muddad u hadhay.
Horta laba sano in loogu daro waa la hubaa,laakiin in 4 sano loogu daro ayaa quman.
Lklkkkkk rooble afdeeb abi axmed iyo cagjarna labo ayaa loogu darayaa Ethiopia doorasho lamaqabanayo
Anniga ninkaan ma’aqaan, laakiin, waxeey maskaxdeeyda yar i tustay in Amnesty International, hay’ada la dhaho, iyo kuwa badan oo hay’adda u dooda xaquuqda isku sheega in eey u doodaan, maalgaliyaan, taageerana argagixisda alshbabaab, si wadamada qaarkooda xasilooni darro loo galiya. Somaliya waxeey aheeyd muddo dheer masraxyada ugu weeyn oo eey hady’adaan Amnesty International, iyo hay’addo badan oo dowladdo kale eey ku dheeldheelayeen.
Now, ninkaan waxaa kula taliyay dowladda dhexe ee lagu ilaaliyo Xamar in eey xirto waa hay’adaan Amnesty Intertional, waxaan lagu eedeeyay in uu dad laayay. Now, sida aan qiyaasayo dadkaan uu laayay waxeey ahaayeen argagixisso alshbaaab, iyo dad taageerayay argagixiso alshbabaab. Marka, waxa eey dad badan oo Somali ah ogeeyn ayaa waxeey tahay in madaxweeyne Farmaajo iyo ra’iisalwasaare Kheeyre looba doortay in eey alshabaab hesho gabaad, oo eey soo noolaato. Dadka sida ninkaan ee maamulka Kismaayo ka tirsan ee sidii larabay u laayay, ula dagaalamay argagixisada alshabaab waa tan iyada oo loo adeegaya alshbaab la xirrayo.
Waa fariin, lagu raali galinaya, laguna dhiiragalinaya argagixisada alshbaab in ninkaan iyo dadka lamid ah ee ladagaalamo argagixisda alshbaab la xirro. Waa qancin la qancinayo argagixisadda alshabaab xarriga ninkaan.
Cadeeyn intaas ka weeyn looma baahna. Dowladad dhexe ee lagu ilaaliyo Xamar, waa mid la shaqeeyso argagixisda alshabaab. Waana sababta eey not only 4 years oo qasaaro ah u aheeyn doorashadii madaxweeyne Farmaajo, laakiin, 10 years ayaa dib loo celiyay dagaalkii lagula jirray argagixisda alshabaab.
Hadii ku xadgudub dad Somali, iyo waxyeeleeyn dad Somali laga hadlayo meeqa dambiila ayaa Xamar si xor ah u jooga, kuwa uu kamidyahay argagixiyaha weeyn Xassan Daahir Aweeys iyo alshbaab badan, kuwa eey kamidyahiin qabqablayaal dagaal, oo uu kamidyahay kan gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabeen Farmaajo ee Cumar Filish, iyo meeqa kaloo qabqable ayaa Xamar joogta? Daanyeero.
Telefeeshinka qaranka dalkeena Somaliya oo baahiyey Xeebta Berbera ee Gobolka waqooyi Galbeed dalkeena Somaliya .
Facebook ka eeg sawirada Telefeeshinka qaranka dalkeena . Hoos Riix
Berbera , Waqooyi Galbeed , Somaliya .
Ninkaan waa daanyeer dadkiisa u laayay ilkadheer iyo ilmo Tigree.Axmed madoobe iyo Gabre ayuu dakano u galay.
Wax aydan ogayn daanyeernimo yaysan idinku khasbin.hab local ah wuu u xalin karay balse daanyeer lagu shaqaystay weeye waana laga gooynayaa wixii uu gaystay,haddii uusan danbi lahayna wuu soo bixi.
Cadaalada u hiiliya belo idinku dhacdaye caanoboodhe dhacay baad ka dhargaysaan wax aydan ogayn ka hadlaysaan.Sidee yeelaysaan victims?
Lama joogo waqtigii lays xisaabin lahaa, xarigga ninkan sax ma aha, dhibka ugu yar ee xariggiisu sababay waa Gedo oo awalba xaalkeeda khilaaf hulaaqayay in uu baasiin ku sii shubay. A.Madoobe taageerayaal badan buu ku tashkiiliyay ninkan xariggiisa oo reer Gedo ah.
Dhanka caddaaladda marka laga eego dee raggii shacabka suqaarin jiray oo wali afka dhiig ku leh baa dawladda ka buuxa ee maxaa isaga ku gooniya, mise waa looma ooyaan?. Caddaaladdu markay la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan noqoto caddaalad ma aha.
Waxaa kaloo meesha ku jira isku hallayn iyo in aanay beeshiisu ka mid ahayn beelaha la maslaxo intay cara biq isla siiyaan. Sharci iyo xisdiba kuma saxna xariiga ninkani aragtidayda, waayo dambiile haba ahaadee waqtigeedii lama gaarin.